ChiGeorgian chess nyeredzi inomhan'arira Netflix yekumudaidza kuti Russian
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mafirimu » ChiGeorgian chess nyeredzi inomhan'arira Netflix yekumudaidza kuti Russian
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • tsika nemagariro • mafirimu • Georgia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Netflix nekushinga uye nemaune akanyepa nezve zvakaitwa naGaprindashvili nechinangwa chakachipa uye chisina musoro chekusimudzira mutambo nekuita kuti zviite kunge gamba rake rekunyepedzera rakakwanisa kuita zvisina mumwe mukadzi, kusanganisira Gaprindashvili.
ChiGeorgian chess shasha inokanda kumwe kusvibiswa mhosva inopesana neNetflix yekumuratidzira zvisirizvo mumitambo yavo yakarova.
Netflix inopomerwa kuita zvebonde zvakanyanya uye kuzvidza, uye pachena manyepo mumaterevhizheni avo.
Nona Gaprindashvili akamhan'arira Netflix mhosva muFederal District Court muLos Angeles.
Mutambi wechiGeorgian chess Nona Gaprindashvili akamhan'ara mhosva yekusvibisa mari inosvika madhora mazana mashanu emadhora kunaNetflix nekuva munhu anoita zvebonde zvakanyanya uye achimuratidzira seRussia mumakwikwi e5 akateedzana 'The Queen's Gambit'.
Nona Gaprindashvili, mukadzi wekutanga kuwana chinzvimbo chemudzidzisi wechess wepasi rose uye mukwikwidzi wechishanu wevakadzi wechess, akamhan'ara kunaNetflix pamusoro pekutaura nezvake mumutambo wepamusoro, aine muimbi wekunyepedzera anoenderera mberi nekurova vatambi vakanakisa veRussia. muMoscow muma1960.
“Mune chimwe chezvikamu zvakatanga muna 1968, mumwe muongorori anoti mutambi wechess Nona Gaprindashvili haana kumbosangana nevarume. Asi izvi zvakaipa, "gweta Maya Mtsariashvili, mumwe weBLB, kambani yemagweta yeGeorgia inomiririra mutambi, akadaro nhasi.
Gweta rakawedzera kuti basa ravo pamhosva rakatanga munguva pfupi yapfuura iyo Netflix TV dzakateerana kuburitswa.
Gaprindashvili, makumi masere makumi masere atora chikamu chechikamu chekupedzisira mune zvakateedzana izvo zvinotsanangura "chinhu chisina kujairika pamusoro pake" ari murume wake.
"Uye kunyange izvo hazvisi zvakasarudzika mu Rashiya, ”Chikamu chechiitiko chinoenderera mberi. "Kuna Nona Gaprindashvili, asi ndiye mukwikwidzi wechikadzi wepasirese uye haana kumbosangana nevarume."
Mumhosva yake yekusvibisa yakamhan'arwa kuFederal District Court muLos Angeles, Gaprindashvili anonzi akarondedzera izvozvo se "zviri pachena manyepo, pamwe nekuita bonde zvakanyanya uye kuzvidza," uye akataura kuti pakazosvika 1968, akange atarisana nemakumi mashanu evarume chess. vatambi.
Chichemo chinoenderera chichiti: “Netflix vasingatyi uye nemaune vachireva nhema nezvezvakaitwa naGaprindashvili nechinangwa chakachipa uye chisina musoro cheku'kwidziridza mutambo 'nekuita kuti zviite kunge gamba rake rekunyepedzera rakakwanisa kuita zvisina kuitwa nemumwe mukadzi, kusanganisira Gaprindashvili. ”
Mhosva yacho inotiwo Gaprindashvili anotukwa nenyaya yekuti Netflix Akamutsanangura semutambi weRussia.
Vamiriri vaGaprindashvili vanoti zvakare kurondedzerwa kwe rechiGeorgian seRussia inyaya ye "kuwedzera pane kumwe kutuka kune kukuvara" uye inoita akati wandei nezve hukama pakati penyika mbiri idzi.
Mutauriri weNetflix akati: "Netflix ine ruremekedzo rukuru kunaMai Gaprindashvili nebasa rake rakanaka, asi tinotenda kuti chirevo ichi hachina kukosha uye tichadzivirira nyaya iyi nesimba."